Disemba 9, 2018 Denial245
Hey, guys Hi!!! Uma unombuzo engqondweni yakho efana kanjani ukufinyelela ku- 192.168.0.1 ikheli le-IP? Ingabe ufuna ukwazi 192.168.0.1 Ngena ngemvume inqubo, uma kunjalo-ke awudingi ukuzibuza noma ukhathazeke futhi? imbangela lapha kule ndatshana ye-Article yami, Ngizokutshela konke indlela futhi uhlelo ukufinyelela 192.168.0.1.
192.168.0.1 ikheli le-IP eliyimfihlo le-Internet Protocol version 4 (IPv4) inethiwekhi (It owaziwa nangokuthi aphethe amakheli computer science). Ikheli le-IP lokumisa okuzenzakalelayo lama-routers angenantambo noma i-ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) modems ezivezwa izinkampani like Netgear, D-Link, Tp-Link, Nabanye. I ukuphathwa kwekhonsoli lezi imizila lungatholakala ngokuvakashela leli 192.168.0.1 Ikheli lasesizindeni se-esipheqululini sakho.
Kanjani ukuze ungene ngemvume ukuze 192.168.0.1?
➥ Okokuqala, Xhuma router Computer yakho naku laptop yakho nge uxhumo lezintambo noma engenantambo.
➥ Landelayo, vula noma isiphi isiphequluli seWebhu kukhompyutha yakho bese uthayipha ngesandla ikheli 192.168.0.1 kubha yekheli lesiphequluli ngemuva kokucindezela ukungena, futhi uzobona ikhasi lokungena ngemvume.
➥ Kulendawo ungatwebula, ungakwazi ufake igama lomsebenzisi nephasiwedi ezifanele.
You Uma ukhohlwa futhi ungazi igama lomsebenzisi ne-password ye-router, bese sicela ufake igama lomsebenzisi nephasiwedi njenge- “Admin” kuzo zombili lezo zinsimu ngoba yigama lomsebenzisi nephasiwedi ezenzakalelayo yama-routers amaningi.
Angikwazi Ngemvume ukuze router yami, Okufanele ngikwenze?
Uma uthayipha 192.168.0.1 kusiphequluli kodwa kungasebenzi 192.168.0.1 akuyona ikheli le-IP router yakho
Indlela eyiyo yokuthola ikheli lakho le-IP elifanele:
You Uma usebenzisa iMac - Iya kuzicelo > Izinsiza > Isikhumulo. Uma uku Terminal, uhlobo"ipconfig" futhi > faka.
➥ Uma usebenzisa i-Windows - Qalisa usesho kwikhompyutha yakho nge-Command Prompt (CMD) . Uma ibhokisi umyalo ivuliwe, uhlobo "ipconfig" futhi > faka.
Indlela Yokubekela Up Wireless router okokuqala?
➥ Okokuqala, ukuxhuma ikhompyutha yakho router yakho nge-LAN (inethiwekhi yendawo endaweni) wire.
➥ Manje uvule isiphequluli kukhompyutha yakho bese ufaka i-https://192.168.0.1 kwibha yekheli.
➥ Khona ikhasi lokungena ngemvume lizovela. Manje
➥ Manje faka igama lomsebenzisi nephasiwedi ezenzakalelayo ebhalwe ku-router.
➥ Landelayo Qala kabusha router yakho bese usetha SSID (Izikhungo Setha Isihlonzi) igama. Kuzoba igama router yakho ukuthi uyoboniswa kwamanye amadivayisi.
➥ Khona Setha iphasiwedi kuzilungiselelo ze Ukuvikeleka kwenethiwekhi.
➥ Manje, chofoza inkinobho Okulandelayo.
➥ Iqalise router isikhathi esisodwa ukulondoloza izilungiselelo.
➥ Manje, Unga cinga inethiwekhi yakho engenantambo sika Izikhungo Setha Isihlonzi (SSID) igama nge-laptop noma ifoni yakho. Manje Faka iphasiwedi, futhi bazoxhunywa router yakho ukuxhumeka kwe-inthanethi.
Misa Ngemvume Iphasiwedi Ukuze D Xhumanisa Wireless router
➥ Okokuqala uvule isiphequluli bese ufaka i-https://192.168.0.1 kwibha yekheli.
➥ ngokuchofoza Okulandelayo inkinobho mauntenance
➥ Bese chofoza Inkinobho Admin
➥ Manje ushintshe iphasiwedi yakho
➥ Ngemva kokushintsha iphasiwedi ngokuchofoza inkinobho Lungisa.
➥ Manje ungakwazi ngemvume nge iphasiwedi entsha.
Ngicabanga ukuthi kufanele kube ulwazi olwanele mayelana 192.168.0.1 Ngena ngemvume. Ngithemba ukuthi zonke izinhlobo imininingwane ewusizo kuwe kodwa uma ebhekene iyiphi inkinga mayelana lokhu okuthunyelwe, sicela ubeke amazwana kithi sizozama ukuxazulula inkinga yakho ngokushesha ngangokunokwenzeka. Siyabonga ngokuvakashela isayithi lethu.
192.168.0.1 Ngena ngemvume
Thumela Previous:192.168.1.1 || Indlela ngemvume 192.168.1.1 Ikheli le-IP?
Thumela Landelayo:Yini 192.168.0.0 Ikheli le-IP?